ERGADA SHIRKA Dhuusamareeb oo laga yaabo in ay arrin xasaasi ah ku dhaqaaqaan dhowaan - Caasimada Online
Home Warar ERGADA SHIRKA Dhuusamareeb oo laga yaabo in ay arrin xasaasi ah ku...
ERGADA SHIRKA Dhuusamareeb oo laga yaabo in ay arrin xasaasi ah ku dhaqaaqaan dhowaan
Dhuusomareeb (Caasimada Online) – Wararka ka imaanaya Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Gobolka Galguduud ayaa sheegaya la filayo in Odayaasha beelaha Mudug iyo Galguduud ee shirku uga soconaya Magaalada Dhuusamareeb ay furaan wejiga 2-aad ee shirka; iyada oo weli uu taagan yahay khilaafka ku saabsan halka shirka uu ka dhacay.
Maamulada Galmudug iyo Ximin iyo Xeeb ayaa qaadacay in shirku ka dhaco Dhuusamareeb, waxaana ergada maamulkaasi ay ku sugan yihiin degmada Caddaado, halka waxgarad isugu jira Ugaasyo, Wabaro iyo Nabadoonno kala metelaya beelaha degan goboladaas muddo ku dhow 2 billood uu shir uga soconayo Dhuusamareeb, iyada oo la filayo in shirkaasi uu galo wejiga awood qeybsiga iyo dhismaha hayádaha dastuuriga ah sida Baarlamaanka iyo doorashada Madaxweynaha.
Madaxweynaha Soomaaliya oo dhowaan kulan kula soo yeeshay Dhuusamareeb ergada shirka uga soconaya halkaas, ayaa ku guuldareystay in odayaashii uu la kulmay ku raacaan in shirka la isugu tago Caddaado; mana jirto ilaa hadda war rasmi ah oo ka soo baxay hay’adaha Dowladda tan iyo wixii ka dambeeyey socdaalkii fashilmay ee Madaxweynaha.
Cabdifitaax Cali Diiriye oo ka mid ah ergada ka qeybgaleysa shirka Dhuusmareeb, ayaa sheegay in waxgaradka ku sugan halkaasi ay yihiin kuwa uu dastuurka dalku u ogolaanayo in ay goáan ka gaaraan masiirka Gobolada ay metelaan; isaga oo ugu baaqay xubnaha ku sugan Caddaado in ay ku soo biiraan shirka.
“Haddii fikrad la isku qabto waxaa dariiqa saxda ahi uu yahay in la raaco halka ay dadka intiisa badani isku raacaan (majority); walaalaha ku sugan Dhuusamareeb waa ku 10 jibaarmaan kuwa Caddaado; waxa laga hadlayo na ma noqon karaan rabitaan beel ama qof, waxaanu ka hadleynaa waa masiirka ummadda intaas la eg ee Gobolada Galguduud iyo Mudug ku sugan” Ayuu yiri C/fitaax oo u waramayey mid ka mid ah Idaacadaha FM-yada Muqdisho; wuxuuna intaa ku daray in Dowladdu ay ku qasban tahay in ay u hogaansato rabitaanka dadka ku dhaqan Goboladaas; doorkeeduna uu yahay in ay u fududeyso tasiilaadka ay u baahan yihiin.